Namuhla sizoxoxa nawe ngalokho okufanele ukwenze emva ufaka i-Windows 7. Indlela ukuze usethe i-Internet e-operating system? Ukuthi singadinga? Kuthatha isikhathi esingakanani inqubo? Konke lokhu namuhla futhi sizobe ukukhuluma. Ake uqale nge yokuthi sixoxa ezinye izici inqubo ukulungiselela.
Kuthiwani uma ungazi ukuthi yini okufanele uyenze emva ufaka i-Windows 7, ukuthi ungasetha kanjani ku-intanethi kakhulu kangangokuba waze waqala ukusebenza ngokujwayelekile ke ake ukubhekana kule ndaba enzima.
Into yokuqala sidinga imishini ukungena World Wide Web. Manje kungaba yini - kusuka USB-imodemu ezivamile ADSL-imodemu. Ukuze idivayisi ngamunye has indlela yayo ukumisa. Kuyinto namuhla yabo futhi sihlaziya.
Ngaphezu kwalokho, uma ucabanga ukuthi yini okumele uyenze emva ufaka i-Windows 7, indlela yokumisa-Inthanethi ukuze wasebenza emihle, uzodinga Thenga kakhulu isikhathi nesineke. Kaningi, ukwehluleka kungavuka esebenzayo kanye nezinkinga ukuthi lungasebenzi evamile futhi kubambezela inqubo yokusetha imishini. Ngakho masizame manje ukuthatha isinyathelo.
Awazi kanjani ukuxhuma kwi-Inthanethi ngemuva kokuthi kabusha i-Windows 7? Akumele nje uzilungiselele, kodwa futhi ukulungiselela uhlelo lokusebenza ngendlela efanele. Lokhu kuzosiza ukunciphisa ingozi nesenzakalo sokwehluleka futhi eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa esiphansi. Ikakhulukazi ngemva "ukuhlanzeka" ukufakwa kukhompyutha yakho.
Yini okudingeka? Faka abashayeli zonke imishini axhunyiwe. Ngaphandle kokuhlela imodemu, yebo. Naye siyosebenza kamuva. Kunalokho, thatha zonke izindilinga eziyizicaba nabashayeli ukuthi une (ikhadi inethiwekhi, ihluzo ikhadi, ikhadi umsindo , njll) bese uwafake kukhompyutha. Ngemva kwenziwa le nqubo, ungakhohlwa ukuqalisa phansi.
Manje singakwazi ukucabanga ukuthi kufanele wenzeni emva ufaka i-Windows 7. Indlela ukuze usethe i-Inthanethi? Yenza kube lula kuhle uma wazi ukuqala lapho. Wena zama ukubhekana kakhulu imishini "ubudala" abese eqala kudlule emisha.
Ngakho, siqale nawe uxhumano ethandwa kakhulu-World Wide Web. Ngaphezu kwalokho, ukucabangela manje kubhekwe indlela endala. Kucondza uxhumano nge ADSL-imodemu.
Awazi kudlule kanjani ngemva ufaka i-Windows 7 isethaphu -Internet? Sine lokuqala zonke ukuxhuma imishini kukhompyutha. Ukuze wenze lokhu, sivale izintambo ku Slots ezifanele "ibhokisi", futhi omunye ekupheleni provodochki "main" Kufanele unamathele computer. It ixhunywe Isixhumi okhethekile ekhadini inethiwekhi (Akunakwenzeka uhlanganise). Ungabese uvule ikhompyutha bese ukusebenza.
Sizodinga ukufaka abashayeli for imishini. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa ukufakwa CD, ngokuvamile iza isethi nge imishini. Ukulungele? Bese uya "Control Panel", bese - ku "Inethiwekhi Inthanethi". Kukhona uthole "Network Management kanye Ukwabelana Centre" bese ukhetha phansi ifasitela "Yakha uxhumano olusha."
Uma ungenayo i-Inthanethi ngemuva kokuthi kabusha i-Windows 7, ungaqhubeka izenzo zethu. Ku-window okuholela, khetha "Xhuma emsebenzini" bese "Cha, udale uxhumano." Sebenzisa "uxhumano yami ku-inthanethi ye-VPN." Bese uchofoza ku- "Inthanethi ukuhlehlisa kulungiselelwa", faka ikheli le-IP e-"ikheli le-inthanethi". Call ngandlela-thile ukuxhuma, qamba iphasiwedi bese ugcine.
Buyela "Inethiwekhi esilawula". Uzobona ukuthi kukhona uxhumano olusha. On kubalulekile chofoza inkinobho yegundane kwesokudla bese ukhetha "Properties." Sizosebenza ku "Ukuphepha" ithebhu. Uhlobo Connection ukhethe "Lwesibili Logqinsi", kanye nedatha ukubethela - "Xhuma ngisho ngaphandle ukubethela."
Ucabanga mayelana nendlela ukuxhuma kwi-Inthanethi ngemuva kokuthi kabusha i-Windows 7? Iya "Inethiwekhi" ithebhu. Thika "Inthanethi Inguqulo 6 (TCP / IPv6)" bese ugcine. Nalapha futhi, ukuya "Properties Connection". Manje, kule "Inethiwekhi" ingxenye, chofoza ku izakhiwo "Inthanethi Inguqulo 4" futhi uthayiphe ibhokisi ip-ikheli kanye subnet buso (okufanele azise umhlinzeki). Shiya nezinye izindima nalutho. Londoloza izinguquko zakho. Yilokho.
Ungase ucabange ukuthi yini okumele uyenze emva ufaka i-Windows 7, ukuthi ungasetha kanjani kuyi-Internet ukuze ukuhlinzwa evamile ye-computer usebenzisa i-USB imodemu? Njengomthetho, awudingi isenzo esincane noma abangenaso nhlobo.
Kufanele uqale nge imodemu (ngekhadi pre-SIM efakiwe kuwo) ukuba "umshini" yakho. Kungcono ukuxhuma imishini ukuze slot lapho kuyoba lula ukuthola. Uyobe udinga ukufaka abashayeli isimiso esikhethekile ukusebenza kokuhlela imodemu. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi noma ukusebenzisa disk kufakwe noma ulinde isikhashana eside - Ukufakwa ngokuvamile kwenziwa ngokuzenzakalelayo ngemva kokuxhuma imishini.
Uma loluhlelo seluphelile, siyokwazi ukungena umphathi hlelo, faka igama lomsebenzisi nephasiwedi (inombolo yefoni kanye nephasiwedi uzonikwa), bese ngokuphepha ukusebenzisa uxhumano lwe-inthanethi. Njengoba ubona, lutho nzima.
Futhi nakhu okunye indlela kuhle ezithakazelisayo ukusebenzisa i-intanethi. Lokhu kusetshenziswa kwegama le-USB-router. Naye izinkinga, njengoba umthetho, kukhona okuncane esingaphansi imodemu ephathekayo.
Ukuze uqale, ufaka iSIM hardware khadi nebhethri. Shaja "umshini" nge ishaja ekhethekile bese ukuxhuma wire ku-USB-isixhumi. Vula imishini futhi uyifake abashayeli kudingeka. Basuke ebiyelwe ikhithi kuya "Simcoe" futhi router.
Manje kuzodingeka ulinde ukufakwa umphathi ekhethekile ukuze ungene kuhleloxhumano. Uma loluhlelo seluphelile, uzokwazi ukusebenzisa i-intanethi ngokuphepha. Kuyoba ngokwanele ukuba uthayiphe login nephasiwedi, ngemva kokubuya kwi-router uqobo. Yilokho kunjalo. Njengoba ubona, lutho fancy noma ekhethekile.
Uma uqaphela ukuthi awunayo i-Inthanethi emva ufaka i-Windows 7, kodwa likwazi ukuxhumana Umhlaba ikhompyutha Wide Web ngamathuluzi-Wi-Fi, ungakhathazeki: ungakwazi ngempela ngokushesha uphinde ukwazi ukungena.
Lokhu kuzodinga khona kunethiwekhi ye-Wi-Fi kumephu. Uma lokhu kungeke kwenzeke, ungakwazi ukuthenga antenna esikhethekile le venture. Fakela abashayeli imishini, bese uchofoza ngezinga elincane ngo-ugqoko. Lapho, khetha inethiwekhi yakho bese uchofoza "ukuxhuma". Uma udinga ukufaka iphasiwedi izikhathi eziningana. Ngemva kwesikhashana uzobona isikali aqala ukugcwala, futhi computer azobika uxhumano yimpumelelo. Ungasebenzisa i-Inthanethi.
Yekuchumana sendlela ukushintsha kukhasi lakho eliyisiqalo ku-Internet Explorer
Lapho intwasahlobo iqala. Izimpawu nezibonakaliso
Okuthusayo - ezweni horror
Isiyezi kwabesifazane: izimbangela nezindlela ukulawula